IFTIINKACUSUB.COM: Dhalin-yaranimadu dheeldheel badana!
Dhalin-yaranimadu dheeldheel badana!
Maxaa ka qurux badan wakhti tagay, Waxaan Isku dayay inaan xasuusto Caruurnimadaydii aan habayaraate wax danbiya lahayn, Waxaan Hadana isku Dayay inaan xasuusto oon Hadana ka cararo Dhalinyarnimadaydii dhibka iyo Danbiga Badnayd.
Markaan Gaadhay 15jir Waxaan tartan xoogan ii galay inaan maro laba dariiq Kuwaas oo kala ah Dariiqa Khayrka iyo Dariiqa Sharka, Nasiib Xumo Dariiqii Sharka ayaan Raacay. Shaydaan ayaa dariiqaas igu soo riday Ana Waan Raacay Ilaa Magacaygii Marka La maqlo shar uun la sawiran jiray!.
Dharaaroka mid ah dharaarahaas Gabadh aan jaar ahayn oo ku Noolayd Xaafadda aan daganahay ayaa aad ii soo eegi Jirtay waloow aanan anigu garanayn eegmadaasi waxay tahay Haddana Ma ahayn mid la odhan karo waa eegmo caashaq ama wax lamid ah toona, inkastoon aaminsaynayba Jacaylka ilayn qalbi-ba ma lihiye.
Hadaba Markaan Dhallinyar badan ka waraystay arinkaas waxay igu qanciyeen inay I jeceshahay ilaa aan ku fikiray inaan waraaqo jacayl ah u diro laakiin Wax Jawaab ah kama helin arinkaas.
Habeenkii waxaan ahaa mid soo hooyda Daakiraada salaadda subaxnimo Waxaan ahaa qolooyinka iftiinka dharaartii la colka ah.
Habeen habeenadaas ka mid ah ayaan albaabkayga Hortiisa ugu imid Kitaab Adkaar Nabawi ah ku qorantahay, Wajigaygu Cadho Darteed ayuu midab casaan ah isku badallay waxaanan yaqiinsaday in ay gabadhii ii soo dirtay.
Waxaan Bilaabay inaan Dagaal La galo talaabadii u horaysay een qaadayna waxay noqotay inaan badalkeeda uga dhigo Hees jacayl ah u qoro maagaceedana raaciyo kuna faafiyo xaafadda oo dhan si looga maadsado Sharafteeduna Hoos Ugu Dhacdo .
Waan Qoray Heestii oo shaydaanna dhinaca haysto Waxaanan Ugu Dhiibay Mid ka mid ah Caruurta Xaafada, Isla In yar kadib waxuu iisoo noqday isagoo timir ii sida sidoo kalena wuu ii sheegay in ay Maanta Soomantahay oo ay Hadiyad ahaan timirtan iigu soo dirtay Fariin ayay iigu soo dhiibatay inay Marka ay Afuraysana ilaahay ii waydiin doonto Inuu Dariiqa Toosan igu soo hanuuniyo.
Timirtii ayaan dhulka ku tuuray cadho darteed. Waxaan Bilaabay inaan ku jees jeeso mararka ay masaajidka ku socoto ilaa Heer ay Hablaha kale ee xaafaddu ku qoslaan aan gaadhsiiyay, Laakiin iyadu ma ahayn mid dhag u dhigta.
Ayaamuhu Way is dabasocdeen Waxaan is arkay inaan kufashilmayo iskudaygii oo dhan Waayo markasta waxay ii soo Hadiyayn jirtay Kutub diini ah Maalin kasta oo ah isniin ahna way soomi jirtay Timirna way ii soo Diri Jirtay. anigoo is odhan jiray Sawtan kuu Soo Dabciwayday ilayn Nin xumaani u Cadahay ayaan ahaye.
Waxay Sidaa Ahaatoba Waxaan Go'aansaday inaan Waddanka Dibadda uga Baxo oon Fasax yar Qaato si aan u soo Helo Farxad iyo ciyaar Dhalinyarnimo oo aanan ka Helin Wadankayga, Waxay qaadatay arinkaasi afar Bilood Haddana Gabadhii Fikirkeedii ayaa igu suuli waayay mar walba waan ku fikiri jiray waxaana xoog iiga yaabisay sida ay ugu badbaadi jirtay dabinadii aan u dhigi jiray si ay xumaan ugu dhacdo
Waxaan Damcay inaan wadankii ku soo laabto Si aan Halkaygii uga sii Wado Arrimihii Xumaa oon Gabadhiina Khayrka u seejiyo kana Dhigo mid Sharka la rafiiq ah.
Wakhtigii Balanta safarkaygu waxay ahayd maalin Khamiis ah goor ay ku beegantahay cadceed dhac ayaa dayuuradda dhexdeeda la iigu keenay timir iyo shaah markaas ayaan xasuustay in ay tahay khamiis maalmihii ay soomi jirtay gabadhii, Run ahaan timirtii maan cunin ee kaliya shaahii uun baan cabay.
Waxaan soo Cago dhigtay Wakhti duhur ah waxaan soo Raacay Gaadhi kiro ah Waxaan imid Xaafadii oo ay isoo Booqanayeen dhamaan Asxaabtaydii Xumayd waxaan u siday hadiyado aan anfacayn qiimahooduna Qaali yahay.
Wakhtigii salaadda ayaa la gaadhay anigoo u kacay dhinacaa iyo Masjidka agtiisa si aan gabadhii ula kulmo. Sidii aan u sugayay salaaddii ayaa dhamaatay walina indhaygii ma qaban Gabadhii, Waan Iska soo laabtay waxaanan is idhi malaha intii aad safarka ku maqnayd ayay Gabadhiiba is badashay oo waaba sidaan rabay!.
Gurigii ayaan iskaga soo laabtay, anigoo buugg aan lahaa baadhaya ayaa si kadis ah iiga soo dhex baxay buugg ay dusha kaga qorantahay Hadiyad ka socota walaashaa Hoostana Karaacisay Qoraal ah
اهداء اليك لعل الله يهديك الي صراط المستقيم
macnaheeduna tahay ''waan kuu Hadiyadeeyay laga yaabaa in ilaahay kugu soo Hanuuniyo Dariiqiisa Toosan'
Waxaan Waydiiyay Cidii Guriga sii Joogtay Cidda Buuggan keentay laakiin wax jaawaab ah ma helin.
Maalintii labaad ayaan damcay inaan buuggii qaaddo oon gabadhii u celiyo si aan ugu soo idhaahdo uma baahni. Waan tagay masaajidkii waxaan kala kulmay sidii shalay oo kale, Waxaan Tagay Xaafadeeda agteeda si aan ula kulmo, anoo waydiiyay Caruur ku ag ciyaarsay guriga Waxaan suaalay Ma joogtaa gabadhii? Waxay iigu jawaabeen waa maxay suaasha aad na waydiisay Malaha Waad ka maqnayd Xaafadaha?!.
anigoo fajacsan ayaan idhi Haa waan ka maqnaa,
Waxay iigu jawaabeen: Masajidka ayay ku Geeriyootay ayada oo sujuudsan Mudo kabaddan laba Bilood.
Markii aan arinkaas Ogaaday waxa igu dhacay yaab iyo jahwareeraad u baddan, Qalbigaygiina wuu qoyay waan ooyay Waxaanan is waydiiyay waxan aan la ooyayaa ma dhimashadeedaa? Mise waa khaatumo wanaageeda? Runtii waan garan waayay sababta ay ilimadu iiga imanayso. Waxaan u soo dhaqaaqay dhinaca gurigayaga anigoo aan kala garanayn jiho aan u socdo waxaan imid albaabkaygii waan garaacay h anigoo moogan in furihii jeebkayga ku jiro,
Waxaan galay xusuus dheer waxaan soo xasuusanayay Eegmadeedii bariga ka ahayd xumaan oo dhan anigoo xaqiiqsaday in ay ku dheehnayd Raxmad iyo wanaag ay ila jeclayd iyo in ay ku hammiyi jirtay siday iiga dhex saari lahayd xumaanta aan ku jiro oo dhan , illaahayna ii waydiin jirtay samme.
Waxaan go'aansaday dhimashadeedii kadib inaan ka fogaado ehelkaygii iyo dhamaan dadkii aan la noolaa oo aan ku noolaado meel ka fog meeshan aan ka haysto xuusahahaa murugoda iyo xannuunka leh.
Waxaan noqday mid salaadda ku xidhan aniga oo saaxiibaddii xumaana ka fogaaday haddana Qaar ka mid ah way I waydiiyeen sababta aan uga fogaaday balse cidna ugama sheekayn arinkaas.
Waxaan ahaa mid caadaystay akhriska kitaabkii ay ii hadiyadaysay oo mar walba aan akhriyi jiray, Waxaanan ilaahay waydiisan jiray Dambi Dhaaf iyo Raxmad waayo Gabadh markasta Hanuunkayga jecelayd ayaan ana Fasahaadkeeda jeclaa waayo gabadha markasta jeclayd inaan illaahay u dhawaado ayaan jeclaa in ay illaahay ka fogaato, Waxaan se ka jeclaa in ay indhaheeda ku aragto isbadallkan igu dhacay Waan Hubaa inay ku Farxi lahayde.
Waxaan U rajaynayaa in ilaahay u Naxariisto Marlabaadna aan janadda ku kulano kulan ka khayr badan kulanka maanta.
WaxaTurjumay: Khalid Mohamed saeed
M/Maraykanka Donald Trump kama maarmo aduunka ,bee...
Hayaaaaaaaaaaay Biriijkii Hargeysa wuu dumayaa .W/...
Dood ka dhex dhacday labada gacmood Midig iyo Bid...
Waar Ninkoow Shaaha ii Shub Walaal !!
War Deg-deg ah:Guddiga Doorashada Madaxweynaha Soo...
Gobolka California Oo Bilaabay Dhaqdhaqaaqyo uu Ka...
Xukunkii ku dhacay dhalin-yaradii Galdogob Hablaha...
Midabkiisii madoobaa, sankiisii ballaadhnaa awgood...
Si ballaadhan u feker!
Ufiirso Sawirkan: Wakaa caqligeeni inna siiyay in ...
Balan qaadyadii Xasan Sheekh maxaa ka qabsoomay.
Dhibaatooyinka caafimaad ee Laga dhaxlo kali socod...
Sigaarya cab iyo Yurubna maxaa kala haysta.
TAARIIKHDA IMAAMU-SHAAFICI (AUN)
Labatan Sano Abahay maan arkin,anoo sheekhana wuu ...
Toban shay oo ka mida talooyinka fiican.
Shaydaan iyo Ibliis hadaad wax ka sheegto dadbaa k...
Somalida badankoodu way ka fanaan in magacyadooda ...
Sheekh Xasan Daahir Aways iyo Sheekh Atam Qabiilko...
Nin Beertay Geed Qaad Ah Isago Aan Garaneyn ,kadib...
Lix bilood Jidh-kayga biyo maan marin!!
Guri gubtay, tobankii qof ee usoo gurmadayna midka...
Ka fa'idaysiga Ajaanibta iyo Hargaysa.
Geelu waa noole caynkee ah ?
Dadkii way wareereen,Tuugu ma hadba ninka xukunka ...
Wax ka barro taariikhda wadanka Singapore.
Sixir bararka maxaa keena .
Facebook ha loo sameeyo Faysal Cali Waraabe.
Qoso cajiib ah: Adeer maxaan ka sheegaa naag Uurle...
TAMARTA MUSTAQBALKA (FUTURE ENERGY)
Jimcahu waa maalin khayr Muslimiinta,dadka qaarna ...
Haweenku waxa ay neceb yihiin ninka go’aankiisu ad...
Maxaad ka Taqaan Taariikhda Sheekh C/raxmaan Al-Su...
Noocyada habaarka ,Dumaroow habaarka joojiya !!
Riyadii reerka dumisay !!
Cadhada badan ee Jamaal Cali Xuseen uu siyasada ka...
Miyiga Ilmadeer ku lahow, magaalana Saxiib.
Sheekh Shariif oo Insha Allaahudii soo Ilaabay,mar...
Dawlad fiican waxaa yeesha , dadka iyagu fiican.
Dhiibaato kasta ma dhaqaale ayaynu ku xalinaa, mis...
BARO: ABTIRSIIMADA IYO TAARIIKHDA QOWMIYADA DIGIL ...
Culimooy Masaajidka kasoo baxa, oo dadka dibada wa...
Qisso dhacday: facebook iska hubi inta aadan Tahn...
Ardaydii Turkiga wax ka baranaysay, badidoodii hal...
Sadaasha Doorashada Somaliland iyo sida codadka lo...
Aqoon-yahankii gaajadu dishootay.
Hooyo Inankeedii uu kaga baxsaday, Xeebaha lagu da...
Sideeda arimood ee Ragga iyo Dumarku isu Guursadaa...
Sida loo kala khalad badan yahay, ayaa loo kala kh...
Macalinkaaga ugu wanaagsani,waa qaladkaaga kuugu d...
Isku day in aad ka faa'idaysato, jaaniska aad mark...
Lacagta si fudud laguma helo.
Caruurta Afrika haday Umusha kasoo badbaado, waxaa...
Dumarku necebaa in lawaydiiyo Da'dooda,raguna adee...
Tolka iyo Walalahaa waxa ay ku jeclayeen , markaa...
Waa maxay xidhiidhka ka dhaxeeya Gun iyo Gumaysi?
Tariikhda iyo dhaqanka Somalidu goormay luntay?
Dil iyo darxumay Hoyaday ugu dhimatay Sacuudiga,an...
Gabadha madoobey istaag aan ku dawadee !!
Idinka ayaa diinta iibiyay Anaguna waanu Iibsanay ...
Qisi Masaajid ka dhacday,ninkii ragcadaha khalday....
Dadku waxa ay amanaan Libaaxa waxa ay cayaan Eeyga...
Shalay dhaantay mooyee,kama rayso maantana!
Foojignaanta sharku,waa dabeecada Adanaha.
Saxiib Afrikaan kasoo hadlayaa , waanan iska basha...
Alla dadka qaar cadawsanaa ,bal Toorayda ay ku dhu...
Sheeko hadaad doonayso, Basaska Hargaysa raac!
Barta Facebookeda waxa ay kusoo qortay, in ay ku d...
Halaysugu yimaado,shirwayne qaran, oo lagaga tasha...
Marwadii indhaha beeshay, ee dalka Japan kicisay !...
Geeridii Ilmahayga iyo go'aankii xaaskayga.
Warqad ku socota qof dhintay.
Maxaa ala qabsadey nin Indheer garad ah Iyo nin sa...
God ayaan u qoday,waayo Siyasiyiintu way been bada...
Macalimadayda waxaan u keenay, Cadarkii Hoyaday ka...
Ingiriisku ha arko in dadka buurbuurani, abaarta k...
Reer Somaliland-now Bajuuni maaha cay, balse waa ...
Dhakhtar Tumaal ayaan la tashaday ,kadibna i daawe...
Ilayn qofkastaaba Madaxwayne wuu noqon karaa!!
Ka ganacsiga Malabka iyo Cadarka, waxa lagu bartaa...
Qof lagu jiro Allah og,maxaa loola jeedaa?
Bal da'da uu yahay uu, Xamar u ooyaayo eega !!
Fa'iidada ku xeel dheeraanta sandarsiga biyaha.
La'jiifiyaana banaan, halkay ka timi?
Shib ka dheh,sheekha waa la kariwayee!
Waar anigu ma waaliye ,albaabka iga fura!
Guryahaan dhistay eeg ,hadalkaa waxaa laga hayaa, ...
Nin Bidaartu ay biyo dhigtay ayaan ahay,balse mura...
Dhibaatadu waa sida Milixda,waana hadba inta aad B...
Maxaad samayn lahayd ,markaad Janada gasho ?
Libaax baariya oo la ciyarayay Inanyar, oo uu dila...
Qof bulshada ka caan ah noqotaye,maxaad caan ku no...
Dawadaan Kudafada ku tuuray, halkee laga soo helay...
Qiso cajiiba :- Dardaarankii Faraska iyo doqoniima...